IHuawei P30: Iimpawu zokuqala zokuphela okuphezulu | Iindaba zeGajethi
I-Huawei ekugqibeleni ivelise isiphelo sayo esitsha kwisiganeko eParis. Isiphelo esiphakamileyo esikhokelwa yiHuawei P30, Yeyiphi enika igama kolu sapho lweefowuni zohlobo lwesiTshayina. Umboniso esinawo ndikwazile ukulandela bukhoma kwaye apho siyazi khona le fowuni intsha yenkampani. Yintoni esinokuyilindela kuyo?
Sele sineHuawei P30 ezandleni zethu, ke siza kukuxelela umbono wethu malunga nesi siphelo sitsha sophawu. Ifowuni apho siphinde sabona inkqubela phambili ephezulu eyenziwe nguHuawei kwimarike. Ungaphoswa sesi siphelo siphezulu!
Ukucaciswa ngokupheleleyo Unokufunda ngale fowuni intsha apha, kwinqaku apho siqokelele khona intetho yayo. Emva koko, sikushiya nemiboniso yokuqala yokuba le Huawei P30 isishiyile. Kungekudala siza kuba nohlalutyo olupheleleyo lwesi siphelo silungele wena.
2 Iprosesa, i-RAM, ukugcinwa kunye nebhetri
3 Iikhamera zeHuawei P30
Ekuboneni kokuqala, sele uwubonile umohluko ocacileyo phakathi kwale Huawei P30 kunye nemodeli esungulwe kunyaka ophelileyo. I-brand ikhethe inotshi esezantsi, ngohlobo lwethontsi lamanzi kwiscreen. Yinotshi efanelekileyo, engalawuli uyilo lwangaphambili kakhulu. Eminye, ikhethe ukunciphisa izakhelo kangangoko kunokwenzeka, yenza uninzi lwangaphambili kwisixhobo. Kwakhona, uphawu luzibophelele ekusebenziseni iglasi egosogoso. Okuvumela ukusetyenziswa kokunethezeka ngakumbi kwayo.
IHuawei P30 inesikrini se-OLED esine-6,1-intshi, ngesisombululo esipheleleyo se-HD + sama-pixels angama-2.340 x 1.080, ane-19,5: 9 umyinge wescreen, esiqhelekileyo kula matyala ngolu hlobo lwenotshi. Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen sesixhobo, njengoko sele sibona kwiimodeli ezininzi ezikuluhlu oluphezulu. Ngaphambili sifumana ikhamera enye, apho sinokuvula khona ebusweni. Siza kukuxelela ngakumbi malunga nekhamera kamva.
Emva sifumana ikhamera yangemva kathathu kwisixhobo, ngokudityaniswa kweelensi ezininzi. Kwiimodeli zalo nyaka, iHuawei iazise imibala emitsha. Sinezinto zakudala ezinje ngomnyama okanye umhlophe, kunye nee-shades ezintsha, ezibizelwe ukoyisa abathengi. Ke abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha ezona bazithandayo. Umzimba wefowuni wenziwe ngokutsha kwiglasi, wawunika ukubonwa kwepremiyamu ngamaxesha onke.
Ngokubanzi, uyilo lufana neP30 Pro.Le modeli kuphela encinci ngobukhulu, njengoko iPro inesikrini esizi-intshi ezingama-6,47, ngelixa lo mzekelo uhlala kwii-intshi eziyi-6,1. Kodwa kumacala omabini sinesisombululo esifanayo kunye nephaneli efanayo ye-OLED.
Njengoko kulindelekile, le Huawei P30 isebenzisa iKirin 980 Yeyiphi iprosesa enamandla kunazo zonke i-brand ekhoyo namhlanje. Iprosesa esebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela, kunye neyunithi ethile yayo. Isilumko esisetyenziswa kwifowuni ngokubanzi, ukongeza kwiikhamera. Kule meko, isebenzisa indibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa, i-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Nangona abasebenzisi beya kuba nethuba lokwandisa indawo yokugcina egciniweyo. Ke ukuba bafuna ngaphezulu, ayizukuba yingxaki.
Kwibhetri, sikwafumana ukuphuculwa yinkampani. Kwimeko yale Huawei P30, sifumana Ubungakanani bebhetri ye-3.650 mAh. Iya kuba nentlawulo ekhawulezileyo yohlobo lweshishini laseTshayina. Enkosi ngayo, kunokwenzeka ukubiza i-70% yebhetri kwimizuzu engama-30 kuphela. Oko ngokuqinisekileyo kuya kuba luncedo kubasebenzisi kuzo zonke iintlobo zeemeko ezahlukeneyo.
Ngokudityaniswa neprosesa, kulindeleke ukuba ibhetri isinike ukuzimela okuhle. Nangona kolu luhlu, iHuawei ihlala ihlangabezana nalo mba kakuhle. Ukongeza, Kuya kufuneka songeze ukuba sele ifikile ngePie ye-Android nge-EMUI 9.1. Ke inkqubo yokusebenza ngokwayo sele inemisebenzi eyahlukeneyo enceda ukulawula ngcono ibhetri. Kananjalo akufuneki silibale ukuba sinepaneli ye-OLED, ethi isetyenziswe ngamandla. Ngamafutshane, izinto ezinceda ukunciphisa ukusetyenziswa kwefowuni ngalo lonke ixesha.
Iikhamera zeHuawei P30
Kunyaka ophelileyo uluhlu lwe-P20 lwaluyinkqubela phambili yokufota kolu luhlu. Ngo-2019, i-brand ithatha elinye inyathelo malunga noku kuluhlu. IHuawei P30 isebenzisa ikhamera yangemva kathathu. Azizizo iikhamera ezifanayo esizifumana kwiP30 Pro, nangona zineeyantlukwano ezimbalwa ngokubanzi. Ezinye iikhamera ngokungathandabuzekiyo zithembisa ukukwazi ukuthatha iifoto ezintle. Njengazo zonke ii-smartphones zorhwebo, sinobukho beArtificial Intelligence kuzo.
Sifumana Ukudityaniswa kweenzwa ezintathu: 40 + 16 + 8 MP. Inzwa nganye inikwe umsebenzi othile. Sineyona sensor iphambili ye-40 MP, ene-aperture f / 1.6 kunye ne-RGB sensor eyakhiwe ngokutsha ngophawu, ukuze sibe nokukhanya okukhulu ekukhanyeni. Eyesibini yenye ye-16 MP nge-f / 2.2 kwaye eyesithathu yenye ye-8 MP nge-f / 3.4. Umdibaniso onamandla owenza kucace ukuzibophelela kophawu lokufota.
Ngelixa ngaphambili sinenzwa enye. IHuawei isebenzise ikhamera ye-32 MP nge f / 2.0 ukuvula ngokufanayo. Kule isivamvo sikwafumana ukuvulwa kobuso besixhobo. Ke singazisebenzisa zombini iinkqubo kwesi siphelo siphezulu.
Kwiiveki ezimbalwa sinethemba lokuba uhlalutyo lwale Huawei P30 lukulungele. Okwangoku sinokwenza ngoku ngombono ocacileyo wokuba le nto isinika isiphelo esiphezulu. Imodeli ephinda ibonise inkqubela phambili eli candelo linayo kwishishini laseTshayina. Ifowuni ikushiya njani?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IHuawei P30, ukubonakala kokuqala kwesiphelo esitsha sophawu
Indlela yokwahlulahlula iPDF